BASBAAS KHAFIIF AH: NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE KORITAANKA GUDAHA - FALEETI
Liiska noocyo of basbaas kulul u koraya at home
Basbaas khafiif ah oo leh guul weyn ayaa la kori karaa ma aha oo kaliya beerta, laakiin sidoo kale guriga, ee dheryihii. Natiijo ahaan, waxaad helaysaa lafo jilicsan oo dhirta qurxoon. Maanta, waxaa jira noocyo badan oo noocyo gudaha ah on sale, laakiin waxaan ka fikiri doonaa noocyada ugu delicious iyo quruxda badan oo basbaas kulul beerashada on windowsill ah.
"Wax yar Miracle"
Waxay cadeeysaa markii hore noocyo ah basbaaska gudaha. Beedka wuxuu gaadhaa heer aan ka badneyn 30 cm waana mid isdhaafsan ku filan.
Midhaha "Miracle Little" waa mid aad u qurux badan oo qurux badan, qaab dhismeed ah, oo u eg midabada lalabada aan la furin.
Meelaha yar yar waxay koraan qiyaastii 5-7 cm oo dherer ah, miisaankoodu waa shan garaam. Kala duwanaan badanaa waxaa badanaa loo isticmaalaa qurxinta barxadaha, baalalka, daaqadaha jikada.
Seeds lagu beeray bishii Maarso.
Qodobka ugu habboon ee ciidda waa isku dar ah ciid, caleen iyo dhul sodan oo ah saamiga 1: 2: 1. Ka hor inta beerto, miraha waxaa lagu qooyay maalin, ka dibna la qalajiyey oo ku faafay ciidda, rusheeyey top of lakabka khafiifka ah ee dhulka. Dheriga waxaa lagu daboolay caag balaastig ah. Ka hor inta beero dhulka waa in la waraabiyaa.
Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka khudradda + 22 ° C ... + 25 ° C. Laba toddobaad kadib, caleemaha ugu horreeya ayaa soo baxaya, iyadoo filimka laga saarayo. Haddii ay jiraan geedo badan oo dheriga ah, marxaladda muuqaalka 2-3 caleemo run ah, waa la fadhiisan karaa. Xaaladdan oo kale, tallaalka waa in la fuliyaa oo keliya marka la barbardhigo dhulka ee xididada. Dhoobada waa inaysan noqon mid aad u ballaaran: qiyaastii 12 cm dhexroor, iyo laba litir oo qoto dheer.
Ka dib marka la sameeyo labo baalmood (marka lagu fadhiisto, hal toddobaad iyo usbuuc qalliinka ka dib), waxaa lagu talinayaa in lagu daro basbaaska leh xal 5 g oo amooniyam ah, 7 g of potassium sulphate iyo 12 g oo ah superphosphate halkii 5 l oo biyo ah.
Quudintaas waa in la soo celiyaa dhowr jeer iyadoo la raacayo laba toddobaad. Furka oo si joogto ah u waraabiyay biyo diirran. Kala duwan waxaa loo tixgeliyaa mid hore iyo ka dib 60 maalmood ka dib marka la beerto, miraha waxaa laga filan karaa. Waxay dhadhamiyaan aad u fiiqan, sababtoo ah "Miracle Little" maaha wax aan micne lahayn oo loo tixgelinayo mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee basbaas qadhaadh.
Ma taqaanaa? In habka Bisaylkiisa, peppercorns of inta badan noocyada gudaha ku bedelaan midabka: laga bilaabo cagaaran, kareem, huruud ah, oranji, dhar guduudan ilaa cas ah dhammaadka Bisaylkiisa. Sidaa darteed, waqti isku mid ah on duurka u fiirsan karaa miraha midab badan.
Kala duwanaansho badan oo bacrin ah. In height dhirku ka gaaro 25 ilaa 35 cm, iswada. Miraha yar yar, qiyaastii 3-7 cm oo dherer ah, waxay leeyihiin qaab muuqaal ah. On dhadhan - haraaga, leeyihiin caraf udgoon leh. Inta lagu jiro Bisaylkiisa Percina midabka isbedel (cagaar, huruud ah, guduudan), basbaas macaan ayaa leh midab casaan leh. Xaaladaha ugu fiican ee sii kordhaya:
heerkulka gudaha + 25 ... +30 ° C;
meel qorrax leh;
waraabinta marxalado biyo diirran iyo labiska ugu sareeya ee ku saabsan saddex ama afar jeer xilli.
Beeridda abuurka lagu sameeyey bartamaha bisha Maarso iyo horraantii Abriil. Ka dib qiyaastii laba bilood iyo badh ka dib waxaad filan kartaa muuqaalka daaqsinka.
On windowsill ee aqalka ku qaban kartaa beerta oo dhan: xaaladaha qolka aad ku kori kartaa basasha, salaar, arugula, isbinaajka, yaanyada, qajaarka.
Qaybaha basbaaska qolka "Hungarian jaalle" waxa loola jeedaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan qabow qabow. Waxaad abuuri kartaa abuurka maalmaha ugu dambeeya ee February ama horraanta March.
In height dhirku wuxuu gaari karaa nus mitir. Miraha waa shuban, iyo inta lagu jiro farsamada farsamo waxay yihiin dhalaalaya huruud ah, kuwa noolaha yihiin casaan.
Diirka waa mid qaro weyn leh, wuxuu leeyahay hooska quruxda badan. Cabbirka miro gudaha ah wuxuu gaaraa 15-20 g.
Shuruudaha lagu sifeeyey kor ku xusan waxay ku habboon yihiin koritaanka noocaan kala duwan. Miraha bislaadaan 90 cisho ka dib markaad abuurto abuur.
Waa muhiim! Waraabinta joogtada ah waxay muhiim u tahay kobaca dhammaan basbaaska qolka. Waxaa lagula talinayaa in lagu waraabiyo dhirta oo keliya biyo diirran oo ka yimaada xididka iyo ka dib qorrax dhaca. Haddii hawada qolka uu yahay mid aad u qallalan, basbaas waa in sidoo kale loo buufiyaa si joogto ah.
Daaweeynaa fasalada bartamihii xilli-ciyaareedka, baaxad-qaadashada - 100 maalmood. In height, duurka u gaaraan ilaa 50 cm, kala duwan yihiin noocyo hore ee caleenta aad u cufan. Blossoms qurxinta yar yar ee inflorescences ee midab cad iyo dhar guduudan. Miraha waxay yeelan karaan qaabab kala duwan (wareega, konik, cambareyn) iyo midab (casaan, jaalle, kareem, midab, oranji, bunni ah). Cabbirka mid ka mid ah bacterique waxay ku kala duwan yihiin 20 ilaa 40 g.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu badan noocyo aan qabyo ahayn, waxay u dulqaadataa shucaaca fudud.
"Kalluunka la duubay"
Waxyaabaha aad u xiiso badan ee basbaas qadhaadh oo gudaha ah. Miraha inta lagu jiro Bisaylkiisa waxay leeyihiin midab qurxan oo quruxsan (jilicsan oo ah jaalaha, cagaar, casaan, bunni, ubax guduud ah ku beddelay miraha). Muddada bislaanshaha waxay u dhexeysaa 75 illaa 100 maalmood laga bilaabo wakhtiga beerto. In height dhirku wuxuu gaaraa ilaa 25-30 cm, is haysta, wuxuu leeyahay caleenta cufan. Miraha waa oval-qaabeeya, sii kordhaya jihada xagga hoose. Pepper jecel yahay diirimaadka, qorraxda iyo ciidda qoyan, iyo bacriminta periodiga ayaa lagu talinayaa.
Ma taqaanaa? Isticmaal joogto ah ee qadar yar oo ah basbaas qadhaadh ah ayaa ka caawiya gubista kalooriyeyaasha.
In height dhirku wuxuu gaaraa ilaa 20 cm, sprawling, wuxuu leeyahay qaab la isku dhejiyey. Miraha ku jira marxaladda farsamooyinka farsamada - cagaarka, cagaarshow - orange-dhalaalaya. Peppercorns waa mugdi-qaabaysan, tilmaamay at sare. Diirka waa dhuuban yahay - qiyaastii 2 mm. Celceliska miisaanka hal miro ayaa gaara 6 g: Waxaa si fiican loogu habboon yahay isticmaalka cusub, sida caanaha ama sida xawaashka loogu talagalay suxuunta. Xilliga dhererka - 95 maalmood.
Waxyaalaha dharka aad u jeceshahay waxay noqon doontaa wax aad u badan oo udgoon haddii aad koraan geedo khudradeed. On windowsill wuxuu ku jiri karaa dhir, dill, cilantro, oregano, miro, feeraha, rosemary, basil, tarragon.
Buundooyinku waa iswaji, waxay gaari karaan dherer 20 cm Marka geedi socodka koritaanka, midabka isbeddelka miraha, basbaas macaan leh wuxuu leeyahay midab casaan badan. Muddada bislaanshaha waa qiyaastii 90 maalmood. Wuxuu u baahan yahay waraabinta joogtada ah iyo quudinta. Waxay leedahay dhadhan tartiib tartiib ah.
Wakiilka noocyo bartamihii dhexe. In height of duurka u gaadho wax ka badan 30 cm Miro - badan. Miraha waa shinni-qaabeeya, dhalaalaya, oo kor u kacsan, dhererkoodu wuxuu ka bilaabmaa shan ilaa toddoba sintimitir. Cabbirka mid ka mid ah basbaaska qiyaastii 6 g oo ku haboon beerista wareegga sanadka. Xilliga jiilaalka iyo dayrta, waxaa ugu fiican in qolka lagu hayo, laga bilaabo Abriil iyo xagaaga - balakoonka.
Waxay u dulqaadaneysaa hooska qaraabada. Sida caadiga ah lagu beeray horraantii Maarso. Habka koriinka ayaa isbeddelaya midabkuna ka yimaado iftiin jaale ah, dhar guduudan oo casaan ah inta lagu jiro xilliga xajmiga noolaha.
Waa muhiim! Waxaa lagula talinayaa in ay si khaas ah uga koraan dhirta kale ee ornamental.
Waa darajo dhexdhexaad ah. Buundooyinka waa is dhejin - ilaa 30 cm ee dhererka. Miraha waa yar yihiin, wadne-qaabeeya, ilaa 3 cm dhererka iyo qiyaastii 2.5 cm ee ballaaran. Maqaarku waa dhuuban yahay.
Miisaanka hal maadi ah ayaa ku kala duwan 10 g. Inta lagu jiro xilliga farsamada farsamada, midabka miro waa midab madow, midab bayoolajiyadu waa casaan.
Fasalkan kala duwan waxay u egtahay caraf udgoon wacan iyo casiirnimada midhaha.
Pepper waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa soo saarista paprika, dhir udgoon ee suugada, soosaarka cabitaanka khamriga.
Haddii aad weli doorbidayso basbaas macaan oo qadhaadh ah, waxaad heli kartaa goosashada ugu dhakhsaha badan ama waqti ka baxsan sida caadiga ah adoo sii kordhaya khudradda aqalka lagu koriyo.
Kala duwan oo aad u qurux badnayd. In height of baadiyaha u gaaro 30-40 sentimitir. Miraha waa ribbed qurux badan, wadnaha-qaabeeya, midabka casaanka leh. Muuqaal kala duwan oo kala duwan oo noocyo kale ah ayaa sidoo kale ah in uu leeyahay dhadhan qafiif ah oo fudud, dhadhan qurux badan oo macaan leh. Miisaanka Pepper wuxuu gaari karaa 15g. Gawaarida kala duwan ee noocyada kala duwan waxay noqon doontaa dheellitir weyn oo ah maraqa, suxuunta bariiska iyo digirta.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, basbaas qadhaadh ah ayaa loo isticmaali jiray oo kaliya sida cuntada cuntada, laakiin sidoo kale sida cutubka xisaabinta. Runtii Roma, waxay badanaa bixiyeen abaalmarin, iyo waqtiga dhexe ee Faransiiska, iyagoo bixinaya basbaas qadhaadh ah ayaa ka mid ahaa noocyada ciqaabta.
Kala duwanaanta hore, muddada bislaanshaha waa qiyaastii 75 maalmood. Bushes - iswaafajin, qiyaastii 20-30 cm oo dherer ah iyo 20 cm ballaaran. Geeddi waa mid aad u xiiso badan, dheer iyo fiiqan, oo la mid ah "timaha" ee Gorgon Medusa, 6 cm oo dherer ah, illaa 1.5 cm oo ballaadhan. Habka koriinka, midabku wuxuu isbeddelaa cagaar ilaa huruud ah, casaan iyo casaan inta lagu jiro da'da buuxda. Hal geed oo keliya ayaa soo saari kara ilaa 40 miro oo leh shafo dheer.
Waa in la ogaadaa in noocyada kala duwan cabsi qabow. Waa in lagu beeraa bartamaha bartamaha Abriil waxayna ka ilaalisaa isbedelka heerkulka.
Daryeelka basbaaska gudaha - fudud. Waxa ugu muhiimsan waa in la abuuro nidaam heerkulka diirran, biyo joogto ah, dabacsan ciidda oo marmarna bacrimiya.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Faleeti 2019